उत्तम नि: शुल्क क्रिप्टो सिग्नल जुन २०२२ र क्रिप्टो समाचार | cryptosignals.org
सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्महरु
क्रिप्टो बजार के हो र तपाइँ किन यो व्यापार गर्नु पर्छ? शुरुआती गाइड
सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो सिग्नल टेलिग्राम समूह - पूर्ण गाइड
सर्वश्रेष्ठ Bitcoin दलाल
सर्वश्रेष्ठ Ethereum दलाल
आधारभूत ध्यान टोकन कसरी किन्ने
कसरी सोलाना किन्न
जोडीहरू कसरी पढ्ने
कसरी ट्रेड राख्ने
कसरी दिन व्यापार क्रिप्टो जान्नुहोस्
व्यापार क्रिप्टो स्विंग गर्न जान्नुहोस्
क्रिप्टो पिप्स के हो
एक क्रेडिट कार्ड संग क्रिप्टो किन्नुहोस्
एक डेबिट कार्ड संग क्रिप्टो किन्नुहोस्
हाम्रो वीआईपी टेलिग्राम समूहमा सम्मिलित हुनुहोस्
हाम्रो VIP सिग्नलहरूमा आजीवन पहुँच प्राप्त गर्न eToro सँग $250 जम्मा गर्नुहोस्
वीआईपी सिग्नल नि: शुल्क प्राप्त गर्नुहोस्!
CFD हजारौं ट्रेड गर्नुहोस् CFD हजारौं ट्रेड गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो संकेत १।
CryptoSignals.org उच्च प्रशिक्षित व्यापारीहरूको टोली हो जुन २०१ since देखि क्रिप्टोकुरेन्सी बजारमा ट्रेड गर्दैछ
हामीले समुदाय बनाउने निर्णय गरेका छौं तार ताकि अन्यले हाम्रो सही क्रिप्टोकरन्सी स from्केतहरूबाट सिक्न सकून्।
हाम्रो नि: शुल्क टेलीग्राममा शामिल हुनुहोस्
दैनिक क्रिप्टोकरन्सी सals्केतहरू अनलक गर्नुहोस्
हाम्रो सामेल हुनुहोस् VIP समूह तपाईंको लागि उपयुक्त त्यो प्याकेज छनौट गरेर, हामी पूर्ण -० दिने मनी फिर्ता ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्दछौं ताकि हाम्रो उच्च-गुणको क्रिप्टोकुरेन्सी स trying्केतहरूको प्रयास गरेर हराउन केहि पनि छैन।
बिल गरिएको मासिक £ 42
१-२ संकेतहरू दैनिक
%०% सफलता दर
एन्ट्री, लाभ लिनुहोस् र नोक्सान रोक्नुहोस्
ब्यापार प्रति जोखिमको मात्रा
जोखिम इनाम अनुपात
सर्वाधिक लोकप्रिय बिल गरिएको त्रैमासिक £ 78
बिल गरिएको द्वि-वार्षिक £ 114
बिल गरिएको वार्षिक £ 210
तपाईंको देशमा सर्वश्रेष्ठ ब्रोकर छनौट गर्नुहोस्
एक पेशेवर व्यापारी बन्नुहोस्!
हाम्रो एउटा ब्रोकरको साथ खाता खोल्नुहोस्। र हाम्रो जीवनभर पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् VIP क्रिप्टो स Sign्केतहरू सित्तैमा! दर्ता गर्नुहोस् र न्यूनतम 250$ जम्मा गर्नुहोस् तल हाम्रो छानिएको विनियमित क्रिप्टो ब्रोकरसँग।
eToro एक बहु सम्पत्ति प्लेटफर्म हो कि दुबै विदेशी मुद्रा, स्टक, र Cryptocurrencies मा लगानी, साथै ट्रेडिंग CFD सम्पत्ति प्रदान गर्दछ। CFDs जटिल उपकरण हो र लाभ को कारण पैसा छिटो गुमाउने को एक उच्च जोखिम संग आउँछ।
ब्रोकर छनौट गर्नुहोस्
CFD हरू जटिल उपकरणहरू हुन् र लिभरेजको कारण पैसा गुमाउने उच्च जोखिमको साथ आउँदछन्। खुद्रा लगानीकर्ताहरूको of१.२% ले पैसा गुमाउँदछ जब यस प्रदायकसँग CFD मा ट्रेडिंग गर्ने।
500:1 लिभरेज सम्म, हजारौं CFD हरू र लिभरेज सुविधाहरू उपलब्ध छन्। सूचकांक, FX, क्रिप्टो र थप एकै ठाउँमा। हामी प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस र नवीन सुविधाहरू प्रदान गरेर अतिरिक्त माइल जान्छौं।
हाम्रोमा शामिल हुनुहोस् नि: शुल्क टेलीग्राम समूह
हामी हप्तामा V वीआईपी संकेतहरू पठाउँदछौं नि: शुल्क टेलीग्राम समूह, प्रत्येक संकेत हामी किन व्यापार लिइरहेका छौं र कसरी यसलाई तपाइँको ब्रोकर मार्फत राख्ने भन्ने बारे सम्पूर्ण प्राविधिक विश्लेषणको साथ आउँदछ।
VIP समूह कस्तो छ को स्वाद पाउनुहोस् नि: शुल्कका लागि अब सामील भई!
हाम्रो नि: शुल्क टेलीग्राममा शामिल हुनुहोस्हाम्रो संकेतहरूको बारेमा जान्नुहोस्
शीर्ष-ग्रेड क्रिप्टो संकेतहरूको घर
तपाइँको लाई सिधा प्रदान गरियो टेलीग्राम अनुप्रयोग वास्तविक समयमा!
CryptoSignals.org मा हाम्रो घर-घर व्यापारीहरू घडी वरिपरि क्रिप्टो बजार स्क्यान गर्दछ ताकि तपाईंसँग गर्नु पर्दैन। गहन टेक्निकल विश्लेषण, एआई एल्गोरिदम, र मौलिक अनुसन्धानको संयोजनको माध्यमबाट - CryptoSignals.org निरन्तर हाम्रो सदस्यहरूको लागि ट्रेडिंग अवसरहरू खोज्दैछ।
यदि यो तपाइँको पहिलो पटक हामीलाई भेट्न आयो भने, हामीलाई भन्नुहोस् कि हामी यहाँ के गर्छौं CryptoSignals.org
हाम्रो टेक्निकल र फन्डमनेटल समाचारहरूमा भर्खरको अद्यावधिकहरू पढ्नुहोस्।
कम्पाउन्ड (COMPUSD) बुल्सले बजारलाई एकीकरण रणनीतिमा पुश माथि पुश गर्छ
जुन 24, 2022
बिटकोइन नगद (BCH/USD) मूल्य तल्लो स्थानमा छेउमा सर्छ
पोल्काडोट बुल्सले $6.3 समर्थनको रक्षा गर्दछ किनकि यसले $8.27 उच्चसँग लड्छ
सोलानाले ब्लकचेन र वेब3-कम्प्याटिबल स्मार्टफोन, सागा लन्च गर्‍यो
सिन्थेटिक्स (SNXUSD) ओभरबट क्षेत्रमा लुकेको छ।
Bancor (BNTUSD) भालुहरू $ 0.150 समर्थन स्तरको लागि लक्ष्य गर्दै छन्
Bitcoin खनन कठिनाई कम 2.35% को रूपमा फेला पार्न सजिलो भयो
Uniswap (UNI/USD) मूल्य संघर्ष, औसत $6 मा स्विंग गर्दै
Ripple ले $0.30 माथि राखेको छ किनकि Bulls ले $0.38 को उच्चलाई लक्षित गर्दछ
Binance Coin अघिल्लो न्यूनमा खस्छ किनकि खरीददारहरू $ 207 न्यूनबाट देखा पर्छन्
DeFi सिक्का मूल्य भविष्यवाणी: DEFC/USD ट्रेडहरू $ 0.13 प्रतिरोधको नजिक
जुन 22, 2022
भाग्यशाली ब्लक मूल्य भविष्यवाणी: LBLOCK/USD दायरा चलिरहेको औसत वरिपरि
तपाईं केमा प्रवेश गर्नुहुन्छ
हाम्रो विजेता क्रिप्टोकरन्सी
सिग्नल VIP समूह
यदि तपाईं क्रिप्टोकरन्सी बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईं यसलाई कसरी व्यापार गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ, जोखिमलाई ठीकसँग प्रबन्ध गर्नुहोस् र तपाईंको ट्रेडिंग खाता नाफामा ल्याउनुहोस् भने हामी तल के प्रस्ताव गर्छौं भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।
हाम्रो लक्ष्य १ 1500०० पिप्स एक महिनाको प्रत्येक बिटकइन Bitcoin मा हासिल गर्ने हो!
प्रत्येक एकल व्यापार पूर्ण प्राविधिक विश्लेषणको साथ आउँदछ, किन हामी किन व्यापार लिइरहेका छौं भनेर वर्णन गर्दै, हामी यो गर्छौं ताकि तपाईं ट्रेडिंग गर्दै गर्दा सिक्न सक्नुहुनेछ।
जोखिम रिभरार्ड अनुपात
हामी स्पष्ट रूपमा RRR (जोखिम-इनाम अनुपात) प्रत्येक ट्रेडको साथ र १: २ र १: ratio अनुपातमा काम गर्छौं ताकि तपाईले कहिले व्यापारमा धेरै जोखिम लिनुहुन्न र नाफा कमाउने उच्च अवसर पाउनुहुनेछ।
हाम्रो स only्केतहरू केवल टेलिग्राम मार्फत मात्र पठाइन्छ, जतिसक्दो चाँडो यो संकेत बाट आउँदछ, यो तुरून्तै तपाईंकहाँ आउँदछ।
हाम्रो वीआईपी समूहमा सामेल हुदै तपाईं हाम्रो व्यापारीहरूबाट ज्ञान र अनुभवको सम्पत्ति अनलक गर्दै हुनुहुन्छ, एक सानो मासिक भुक्तानीको अर्थ तपाईं इलिटमा सामेल हुनुभयो।
हाम्रो ट्रेडहरू सँधै बजार कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसैले तपाईं तिनीहरूसँग बोर्डमा जानको लागि प्रशस्त समय हुनेछ, हामी ट्रेड स्विप, स्क्याल्प स्विंग गर्दछौं र हामी विभिन्न प्रकारका ट्रेडहरू प्रयोग गर्दछौं जस्तै खरीद खरीदहरू, बिक्री स्टोप्स र खरीद लिमिट आदि…।
हाम्रो नि: शुल्क टेलीग्राम समूहमा सामेल हुनुहोस्
हामी हाम्रो नि: शुल्क टेलिग्राम समुहमा हप्तामा V भिआइपी स send्केतहरू पठाउँदछौं, प्रत्येक संकेत हामी किन व्यापार लिइरहेका छौं र कसरी त्यसलाई तपाईंको ब्रोकर मार्फत राख्ने भन्ने बारे पूर्ण प्राविधिक विश्लेषणको साथ आउँदछ।
हाम्रो क्रिप्टो सto्केतहरूले कसरी काम गर्दछ
यदि तपाईं क्रिप्टो स of्केतहरूको संसारमा पूर्ण रूपमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई लेमान सर्तमा तपाईंको लागि मौलिक कुराहरू तोड्न अनुमति दिनुहोस्।
क्रिप्टो सals्केतको मुख्य आधार भनेको यो हो कि तपाईं ट्रेडिंग सल्लाह प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो वास्तविक समयमा मार्फत आउँछ
तार - त्यसैले तपाईं कहिल्यै सम्भावित ट्रेडिंग अवसर गुमाउनु हुने छैन। प्रत्येक संकेत जुन टोलीमा छ CryptoSignals.org पठाउनेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीको सेट हुन्छ। यो जानकारी हो कि तपाइँलाई राखेर कसरी हाम्रो स from्केतकबाट फाइदा लिन सकिन्छ
तपाईको छनौट ब्रोकर मा सम्बन्धित आदेश। तपाइँलाई के एक को एक विचार दिन CryptoSignals.org क्रिप्टो सto्केत यस्तो देखिन्छ - उदाहरणका लागि जाँच गर्नुहोस् LTC / USD तल:
तपाईंले माथिकोबाट देख्न सक्नुहुनेछ, उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरूमा सँधै पाँच कुञ्जी डाटा पोइन्ट हुनुपर्दछ। यो क्रिप्टो जोडी आफै हो - जुन यस उदाहरणमा, LTC / USD हो। तपाईले देख्नुहुनेछ कि स signal्केतले लामो जान पनि तोकिदिन्छ - मतलब हाम्रो इन-हाउस विश्लेषकले जोडीको मान बढ्नेछ भनेर सोच्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरू पनि आवश्यक सीमा, स्टप-नोक्सान, र लिनुहोस्-लाभ अर्डर मूल्यहरूको साथ आउँदछ। यदि तपाईं यी मुख्य ट्रेडिंग सर्तहरूमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो उत्तम हो कि तपाईंले क्रिप्टो सिग्नल सेवामा साइन अप गर्नु अघि यसको अर्थ के हो भन्ने बारे दृढ समझ छ।
धुंध हटाउन मद्दतको लागि, हामी यी कुञ्जी संकेत डेटा पोइन्टहरू तल विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं।
उत्तम क्रिप्टो संकेतहरू कस्तो हुनुपर्छ?
यहाँ उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरू कस्तो देखिनुपर्दछ भन्ने बारे एक ब्रेकडाउन छ - र प्रत्येक शब्दको अर्थ के हो।
यो एक धेरै व्याख्यात्मक छ। सबै भन्दा पछि, यो यो बिना भनिन्छ कि तपाइँलाई हाम्रो कुन संकेत जोडीसँग सम्बन्धित छ भनेर जान्नुपर्दछ। हामीले नोट गर्नुपर्दछ कि क्रिप्टोसिग्नल्स.आर.आरजी मा भित्री घर विश्लेषक क्रिप्टोकरन्सी बजारको एक विस्तृत श्रृंखलामा विशेषज्ञ छन्। यसले क्रिप्टो-देखि-फिएट मात्र समावेश गर्दैन, तर क्रिप्टो-देखि-क्रिप्टो जोडीहरू पनि समावेश गर्दछ। अनजान मानिसहरूलाई, एक crypto-to-fiat जोडी एक Bitcoin जस्तै डिजिटल मुद्रा र अमेरिकी डलर जस्तै एक फिएट मुद्रा समावेश गर्दछ। यस उदाहरणमा, जोडीलाई BTC / USD को रूपमा प्रतिनिधित्व गरिनेछ। संयोगवश, यो उद्योग मा सबै भन्दा कडा क्रिप्टोकरन्सी जोडी हो - अरबौं डलर प्रत्येक दिन हात बदल्दै। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, धेरै क्रिप्टो स sign्केतहरू जुन तपाईं हामीबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ, क्राइप्टो सिग्नलहरू यस मार्केटमा केन्द्रित हुनेछन्। यद्यपि हाम्रो व्यापारीहरू क्राइप्टो-देखि क्रिप्टो जोडीहरूको विभिन्न किसिमका व्यापार गर्न पनि राम्ररी जान्दछन्। यसले BTC / ETH लाई मनपर्दछ - यसको अर्थ हामी बिटकॉइन र Ethereum बीच विनिमय दर ट्रेडिंग गर्दैछौं। अर्को क्रिप्टो जोडी औ ...
लामो वा छोटो
थप कुञ्जी मेट्रिक जुन क्रिप्टो स space्केत स्थानमा अनिवार्य छ बजारको दिशा हो। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँ व्यापार मा लामो वा छोटो जानु पर्छ? यस जानकारी बिना, क्रिप्टो संकेत बेकार हुनेछ। अनजान मानिसहरूलाई: यदि हाम्रो क्रिप्टो स signal्केतले तपाईंलाई लामो जान भन्छ, यसको मतलब यो हो कि हाम्रो जोडी मानमा बढ्नेछ यदि हाम्रो क्रिप्टो सिग्नलले तपाईंलाई छोटो जान भन्यो भने यसको मतलब यो हो कि यस जोडी मानमा कमी हुनेछ थप स्पष्ट गर्न: यदि क्राइप्टो स go्केतले तपाईंलाई लामो जान निर्देशन दिन्छ भने, त्यसो भए तपाईंले आफ्नो छनौट क्रिप्टो ब्रोकरमा खरीद अर्डर गर्नु आवश्यक छ यदि, तथापि, क्रिप्टो स short्केतले तपाईंलाई छोटो जान बताउँछ, त्यसोभए तपाईंले बेच्ने क्रमको लागि विकल्प लिन आवश्यक छ हाम्रो टीमको PipSignals मा विश्लेषकहरू लामो र क्राइप्टो जोडीमा छोटो जान सहज छन्। महत्वपूर्ण रूपमा, हामीले व्यापार गर्ने सम्बन्धित डिजिटल मुद्रासँग कुनै भावनात्मक संलग्नता छैन। यसको सट्टामा, हाम्रो मुख्य उद्देश्य स्थितिबाट नाफा कमाउनु हो। ...
सीमित आदेश मूल्य
यसको बारेमा कुनै गल्ती नगर्नुहोस् - उत्तम क्रिप्टो सto्केतहरू सँधै आवश्यक सीमा आदेश मूल्यको साथ आउँदछ। यदि तपाईं व्यापारको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग सामान्यतया दुई विकल्प हुन्छन् जब यो बजारमा प्रवेश गर्ने आउँछ। पूर्वनिर्धारित रूपमा, धेरै अनलाइन दलालहरू तपाईंलाई सोध्छ यदि तपाईं 'मार्केट अर्डर' राख्न चाहनुहुन्छ भने। यसको सरल अर्थ यो छ कि ब्रोकरले तपाईको व्यापारलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नेछ - अर्को उपलब्ध मूल्यमा। यद्यपि यो लामो अवधिको लगानीको लागि ठीक छ, तर यो छोटो अवधिको क्रिप्टो ट्रेडिंगको लागि वास्तवमै उपयुक्त छैन। अन्तर्निहित अनुसन्धान अनुसार गरिएको छ - यो किनभने यो एक विशिष्ट मूल्य मा एक व्यापार प्रवेश गर्न धेरै धेरै जोखिम-प्रतिकूल हो। उदाहरण को लागी, मानौं कि हामी CryptoSignals.org मा BTC / USD ट्रेड गर्दैछौं - जुन हाल $,, ,०० को मूल्य छ। हाम्रो घर-भित्र विश्लेषकहरूको टोली प्राविधिक मा हेर्ने र निर्णय गर्न सक्छ कि BTC / अमेरीकी डलर ach 49,500 उल्लंघन गर्नु पर्छ - त्यसो भए लामो स्थिति लिनु पर्छ। यो सुनिश्चित गर्न हामी केवल $ 50,000 भन्दा माथि मूल्यमा प्रवेश गर्छौं - र curren होइन ...
स्टप-घाटा अर्डर मूल्य
हालसम्म हामीले स्थापित गरेका छौं कि उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरूले तपाईंलाई कुन जोडी व्यापार गर्ने बताउनेछ, तपाईं लामो वा छोटो हुनुपर्दछ, र कुन प्रविष्टि मूल्यमा तपाईंले आफ्नो सीमा अर्डर सेट गर्नुपर्दछ। यद्यपि यो केवल आधा युद्ध हो। सबै पछि, एक जोखिम-विपरीत तरीकाले व्यापार गर्न, तपाईं ठाउँमा प्रवेश रणनीति हुनुपर्दछ। फेरी एक पटक, हामी क्राइप्टोसिग्नल्स.आरगमा यो सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाईंसँग हाम्रो क्रिप्टो स from्केतहरूबाट फाइदाको लागि आवश्यक पर्ने सबै जानकारीहरू छन् - यसैले हामी सधैं स्टप-लॉस र टेक-प्रोफेसन अर्डरहरू प्रदान गर्दछौं। स्टप घाटाको सम्बन्धमा, यो जोखिम प्रबन्धन उपकरण हो जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि हामीले व्यापारमा धेरै पैसा गुमाउँदैनौं - यदि यो योजनामा ​​जानु हुँदैन भने। यो महत्त्वपूर्ण छ, यद्यपि हामीसँग क्रिप्टो बजारको प्रदर्शनको लामो-लामो ट्र्याक रेकर्ड छ - हामी प्रत्येक ट्रेड जितेको दाबी गर्दैनौं। यसको विपरीत, त्यहाँ सँधै हराउने व्यापारहरू हुनेछन्। यो दिमागमा राख्दै, हामी सुझाव दिन्छौं एक उपयुक्त स्टप-हानि अर्डर मूल्य जुन तपाइँले तैनात गर्नु पर्छ हाम्रो क्रिप्टो स on्केतहरूमा अभिनय गर्दा। सीआर मा ...
लाभ-लाभ अर्डर मूल्य
त्यहाँ जानकारीको एक अर्को महत्त्वपूर्ण अंश छ जुन उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरूले तपाईंलाई प्रदान गर्दछ - र यो सुझाव गरिएको टेक-प्रोफेसर अर्डर मूल्य हो। यसले स्टप-लॉस अर्डरको रूपमा काम गर्दछ, तर हाम्रो जोखिम न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा, यसले हाम्रो नाफा व्यापारमा लक गर्न खोज्दछ। उदाहरणको लागि हामीले पहिले दिएका थियौं, हामीले नोट गर्‍यौं कि सुझाव गरिएको टेक-प्रोफेसर अर्डर मूल्य $ २238.74 छ। यो% २१.3। को सुझाव गरिएको सीमा अर्डर मूल्य भन्दा माथि%% मा विराजमान छ - जसको अर्थ हामी यो विशेष क्रिप्टो स on्केतमा%% लाभ लिन खोज्छौं। फेरि, के लाभदायी मूल्य बजारसँग मिल्छ - प्रश्नमा क्रिप्टो दलालले स्वचालित रूपमा व्यापार बन्द गर्दछ। त्यस्तै रूपमा, हामी म्यानुअल रूपमा स्थितिबाट बाहिर निस्कन हाम्रो उपकरणमा बस्न आवश्यक बिना नै हाम्रो नाफामा लक गर्न सक्छौं।
स्टप-नोक्सान र टेक-प्रोफेसन अर्डरमा माथिको खण्डबाट अगाडि बढ्दै, क्राइप्टो सिग्नल.सग.org मा हाम्रो विश्लेषकहरूको टोलीसँग क्रिप्टो स sending्केतहरू पठाउँदा सधैं जोखिम / इनाम अनुपात हुन्छ। माथिको उदाहरणमा, जोखिम १% थियो - जुन हाम्रो सुझाव स्टप-नोक्सन मूल्यमा छ। यस इक्वेसन को इनाम हिस्सा%% थियो - त्यस्तै गरी हामीले हाम्रो टेकि-प्रोफाई अर्डर राख्यौं। महत्वपूर्ण रूपमा, हामीले पठाएका धेरै क्रिप्टो स्केतहरूले १/ of जोखिम / इनाम अनुपात अनुसरण गर्दछ। सरल शब्दहरुमा, यसको मतलब यो छ कि हामी हाम्रो पूंजी को १% जोखिममा छौं 1% को फाइदा लिन। त्यसो गर्दा, हामीसँग नाफा कमाउन प्रत्येक तीन मध्ये एउटा सफल व्यापार हुनु पर्छ।
यो एक धेरै व्याख्यात्मक छ। जे भए पनि, यो बिना यो भनिन्छ कि तपाईलाई हाम्रो कुन संकेत जोडीसँग सम्बन्धित छ भनेर जान्नु आवश्यक पर्दछ।
हामीले नोट गर्नुपर्दछ कि क्रिप्टोसिग्नल्स.आर.आरजी मा भित्री घर विश्लेषक क्रिप्टोकरन्सी बजारको एक विस्तृत श्रृंखलामा विशेषज्ञ छन्। यसले क्रिप्टो-देखि-फिएट मात्र समावेश गर्दैन, तर क्रिप्टो-देखि-क्रिप्टो जोडीहरू पनि समावेश गर्दछ।
अनजान मानिसहरूलाई, एक crypto-to-fiat जोडी एक Bitcoin जस्तै डिजिटल मुद्रा र अमेरिकी डलर जस्तै एक फिएट मुद्रा समावेश गर्दछ। यस उदाहरणमा, जोडीलाई BTC / USD को रूपमा प्रतिनिधित्व गरिनेछ।
संयोगवश, यो उद्योग मा सबै भन्दा कडा क्रिप्टोकरन्सी जोडी हो - अरबौं डलर प्रत्येक दिन हात बदल्दै। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, धेरै क्रिप्टो सals्केतहरू जुन तपाईं हामीबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ, क्राइप्टो सिग्नलहरू यस मार्केटमा केन्द्रित हुनेछन्।
यद्यपि हाम्रो व्यापारीहरू क्राइप्टो-देखि क्रिप्टो जोडीहरूको ट्रेडिंगमा पनि राम्ररी परिचित छन्। यसले BTC / ETH लाई मनपर्दछ - यसको अर्थ हामी बिटकॉइन र Ethereum बीच विनिमय दर ट्रेडिंग गर्दैछौं।
अर्को क्रिप्टो जोडी जुन हाम्रो इन-हाउस विश्लेषकहरूले व्यापार गर्न मन पराउँछन् त्यो हो XRP / XLM। यसले रिपल र स्टेलर समावेश गर्दछ र यसले अत्यधिक अस्थिर सुविधाहरूको कारण धेरै क्राइप्टो संकेत अवसरहरू प्रस्तुत गर्दछ।
थप कुञ्जी मेट्रिक जुन क्रिप्टो स space्केत स्थानमा अनिवार्य छ बजारको दिशा हो। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँ व्यापार मा लामो वा छोटो जानु पर्छ? यस जानकारी बिना, क्रिप्टो संकेत बेकार हुनेछ।
यदि हाम्रो क्रिप्टो स signal्केतले तपाईंलाई लामो जान भन्छ, यसको मतलब यो हो कि हामीलाई लाग्छ कि जोडी मानमा बढ्नेछ
यदि हाम्रो क्रिप्टो स signal्केतले तपाईंलाई छोटो जान भन्यो भने यसको मतलब यो हो कि यस जोडीको मान कम हुनेछ
थप स्पष्ट गर्न:
यदि क्रिप्टो सto्केतले तपाईंलाई लामो जान निर्देशन दिन्छ भने, त्यसो भए तपाईंले आफ्नो छनौट क्रिप्टो दलालमा खरीद अर्डर गर्नु पर्छ।
यदि, तथापि, क्रिप्टो स signal्केतले तपाईंलाई छोटो जान बताउँछ, त्यसो भए तपाईंले सट्टामा बेच्ने अर्डरको लागि अप्ट इन गर्नु पर्छ
पिपसिग्नलहरूमा हाम्रो विश्लेषकहरूको टोली क्रिप्टो जोडीमा लामो र छोटो जान सहज छ। महत्वपूर्ण रूपमा, हामीले व्यापार गर्ने सम्बन्धित डिजिटल मुद्रासँग कुनै भावनात्मक संलग्नता छैन। यसको सट्टामा, हाम्रो मुख्य उद्देश्य स्थितिबाट नाफा कमाउनु हो।
यसको बारेमा कुनै गल्ती नगर्नुहोस् - उत्तम क्रिप्टो सto्केतहरू सँधै आवश्यक सीमा आदेश मूल्यको साथ आउँदछ। यदि तपाईं व्यापारको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग सामान्यतया दुई विकल्प हुन्छन् जब यो बजारमा प्रवेश गर्ने आउँछ।
पूर्वनिर्धारित रूपमा, धेरै अनलाइन दलालहरू तपाईंलाई सोध्छ यदि तपाईं 'मार्केट अर्डर' राख्न चाहनुहुन्छ भने। यसको सरल अर्थ यो छ कि ब्रोकरले तपाईको व्यापार तुरन्त कार्यान्वयन गर्नेछ - अर्को उपलब्ध मूल्यमा।
यद्यपि यो लामो अवधिको लगानीको लागि ठीक छ, तर यो छोटो अवधिको क्रिप्टो ट्रेडिंगको लागि वास्तवमै उपयुक्त छैन। अन्तर्निहित अनुसन्धान अनुसार गरिएको छ - यो किनभने यो एक विशिष्ट मूल्य मा एक व्यापार प्रवेश गर्न धेरै धेरै जोखिम-प्रतिकूल हो।
उदाहरण को लागी, मानौं कि हामी CryptoSignals.org मा BTC / USD ट्रेड गर्दैछौं - जुन हाल $,, $०० को मूल्य छ।
हाम्रो घर-भित्र विश्लेषकहरूको टोली प्राविधिक मा हेर्ने र निर्णय गर्न सक्छ कि BTC / अमेरीकी डलर ach 50,000 को उल्लंघन गर्नु पर्छ - त्यसो भए लामो स्थिति लिनु पर्छ।
यो सुनिश्चित गर्न हामी केवल above 50,000 भन्दा माथिको मूल्यमा प्रवेश गर्छौं - र हालको मूल्य, 49,500 को होईन - यो जहाँ सीमेत आदेश आउँदछ।
अर्को शब्दहरु मा, हाम्रो व्यापार uted 50,000 मा कार्यान्वयन गर्न को लागी - हामीले यस मूल्य मा एक सीमा अर्डर बनाउनु पर्छ। जब हामी गर्छौं, हाम्रो ब्रोकरले मात्र हाम्रो व्यापार कार्यान्वयन गर्दछ यदि र जब बीटीसी / अमेरिकी डलर $ 50,000 हिट गर्दछ। त्यतिन्जेल, सीमा अर्डर पेन्डि remains रहनेछ।
सबै बाहेक केहि दुर्लभ मामिलाहरूमा, सबै क्रिप्टो संकेतहरू CryptoSignals.org मा सुझाव गरिएको सीमा अर्डर मूल्यको साथ आउँदछ। यहाँ अपवाद मात्र छ यदि यदि हामीले ट्रेडिंग अवसर भेट्टायौं जुन हराउनबाट बच्नको लागि तुरुन्त कार्य गरिनु पर्छ।
हालसम्म हामीले स्थापित गरेका छौं कि उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरूले तपाईंलाई कुन जोडी व्यापार गर्ने बताउनेछ, तपाईं लामो वा छोटो हुनुपर्दछ, र कुन प्रविष्टि मूल्यमा तपाईंले आफ्नो सीमा अर्डर सेट गर्नुपर्दछ।
यद्यपि यो केवल आधा युद्ध हो। सबै पछि, एक जोखिम-विपरीत तरीकाले व्यापार गर्न, तपाईं ठाउँमा प्रवेश रणनीति हुनुपर्दछ।
फेरी एक पटक, हामी क्राइप्टोसिग्नल्स.आरगमा यो सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाईंसँग हाम्रो क्रिप्टो स from्केतहरूबाट फाइदाको लागि आवश्यक पर्ने सबै जानकारीहरू छन् - यसैले हामी सधैं स्टप-लॉस र टेक-प्रोफिट अर्डरहरू प्रदान गर्दछौं। स्टप घाटाको सम्बन्धमा, यो जोखिम प्रबन्धन उपकरण हो जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि हामीले व्यापारमा धेरै पैसा गुमाउँदैनौं - यदि यो योजनामा ​​जानु हुँदैन भने।
यो महत्त्वपूर्ण छ, यद्यपि हामीसँग क्रिप्टो बजारको प्रदर्शनको लामो-लामो ट्र्याक रेकर्ड छ - हामी प्रत्येक ट्रेड जितेको दाबी गर्दैनौं।
यसको विपरीत, त्यहाँ सँधै हराउने व्यापारहरू हुनेछन्। यो दिमागमा राख्दै, हामी सुझाव दिन्छौं एक उपयुक्त स्टप-हानि अर्डर मूल्य जुन तपाइँले तैनात गर्नु पर्छ हाम्रो क्रिप्टो स on्केतहरूमा अभिनय गर्दा।
हामीले पहिले दिएका क्रिप्टो स example्केत उदाहरणमा, हामीले नोट गर्‍यौं कि USD २231.79१.229.48 of को प्रवेश मूल्यमा BTC / USD मा लामो स्थिति राख्नुपर्नेछ। हामीले यो पनि भन्यौं कि स्टप-लॉस अर्डर $ २२ .XNUMX ..XNUMX राख्नु पर्छ।
यो राम्रो कारणका लागि हो - किनकि यसले अधिकतम १% घाटा प्रतिनिधित्व गर्दछ। भन्नु पर्दछ, के बीटीसी / अमेरीकीले १% ले हामी विरुद्ध जान्छ र पछि २२ $ ..1 को मूल्यमा हिर्काउँछ - स्टप-लॉस अर्डर भित्र आउनेछ। जब यो हुन्छ, क्रिप्टो दलालले स्वचालित रूपमा हाम्रो लागि स्थिति बन्द गर्छ र हामी हिंड्नेछौं। १% को सानो घाटामा टाढा।
त्यहाँ जानकारीको एक अर्को महत्त्वपूर्ण अंश छ जुन उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरूले तपाईंलाई प्रदान गर्दछ - र यो सुझाव गरिएको टेक-प्रोफेसर अर्डर मूल्य हो। यसले स्टप-लॉस अर्डरको रूपमा काम गर्दछ, तर हाम्रो जोखिम न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा यसले व्यापारबाट हाम्रो नाफामा ताल्चा लगाउने छ।
उदाहरणको लागि हामीले पहिले दिएका थियौं, हामीले नोट गर्‍यौं कि सुझाव गरिएको टेक-प्रोफेसर अर्डर मूल्य $ २238.74 छ। यो% २3१.231.79 suggested को सुझाव गरिएको सीमा अर्डर मुल्य माथि%% मा बस्दछ - यसको मतलब हामी यो विशेष क्रिप्टो स on्केतमा%% को लाभ उठाउन खोज्छौं।
फेरि, के लाभदायी मूल्य बजारसँग मिल्छ - प्रश्नमा क्रिप्टो दलालले स्वचालित रूपमा व्यापार बन्द गर्दछ। त्यस्तै रूपमा, हामी म्यानुअल रूपमा स्थितिबाट बाहिर निस्कन हाम्रो उपकरणमा बस्न आवश्यक बिना नै हाम्रो नाफामा लक गर्न सक्छौं।
स्टप-नोक्सान र टेक-प्रोफेसन अर्डरमा माथिको खण्डबाट अगाडि बढ्दै, क्राइप्टो सिग्नल.सग.org मा हाम्रो विश्लेषकहरूको टोलीसँग क्रिप्टो स sending्केतहरू पठाउँदा सधैं जोखिम / इनाम अनुपात हुन्छ।
माथिको उदाहरणमा, जोखिम १% थियो - जुन हाम्रो सुझाव स्टप-नोक्सन मूल्यमा छ। यस इक्वेसन को इनाम हिस्सा%% थियो - जहाँ हामी हाम्रो टेक-प्रोफाई अर्डर राख्छौं।
महत्वपूर्ण रूपमा, हामीले पठाएका धेरै क्रिप्टो स cry्केतहरूले १/ of जोखिम / इनाम अनुपात अनुसरण गर्दछ। सरल शब्दहरुमा, यसको मतलब यो छ कि हामी हाम्रो पूंजी को १% जोखिममा छौं 1% को फाइदा लिन। त्यसो गर्दा, हामीसँग नाफा कमाउन प्रत्येक तीन मध्ये एउटा सफल व्यापार हुनु पर्छ।
शुरुवातहरूको लागि क्रिप्टो सals्केतहरू CryptoSignals.org
01। बजार बुझ्नुहोस्
के तपाइँ बिटकोइन जस्तै क्रिप्टो करन्सीहरूको व्यापार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ,
Ethereum, र तरंग - तर यो बजार कसरी काम गर्दछ को एक सानो समझ छ?
यदि त्यसो हो भने, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि अनुभवी व्यापारीहरूले प्राविधिक विश्लेषणको शिल्प सिकेका वर्षौं बितिसकेका छन्। यसको अर्थ
सूचकहरूको एक विस्तृत विविधता को माध्यमबाट क्रिप्टोकरन्सी मूल्य निर्धारण प्रवृत्तिहरूमा उन्नत अनुसन्धान गर्दै। RSI, MACD, चालक औसत, र अधिकको लाइनहरूमा सोच्नुहोस्।
02। हाम्रो कौशल-सेट प्राप्त गर्नुहोस्
सत्य यो हो - यदि तपाईंसँग टेक्निकल प्रदर्शन गर्न सीप-सेट छैन भने
एक उन्नत स्तरमा अनुसन्धान, तपाईं बनाउन संघर्ष हुनेछ
क्रिप्टो ट्रेडिंग उद्योगमा लगातार लाभ। यसको सट्टामा, त्यहाँ प्रत्येक अवसरहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो खाता ब्यालेन्सको माध्यमबाट उड्नुहुनेछ। बदलेमा, यसले तपाइँलाई कुनै पनि लेगवर्कमा राख्नु पर्ने बिना नै क्रिप्टोकरन्सी बजारहरू व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ।
अर्कोतर्फ, हामीले यो पनि याद राख्नुपर्दछ कि हाम्रो क्रिप्टो सals्केतहरू केवल newbies लागि उपयुक्त छैनन्। यसको विपरित, तपाईंसँग केवल बजार अनुसन्धान गर्न समय नहुन सक्छ। त्यस्तै, CryptoSignals.org सबै कौशल-सेटको व्यापारीहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ!
03। नाफा संग व्यापार
यो त्यहि हो जहाँ CryptoSignals.org मद्दत गर्न सक्छ। जसरी हामी थप विस्तृत रूपमा तल वर्णन गर्दछौं, हाम्रो क्रिप्टो सals्केतहरूले तपाईंलाई बताउँदछ
जोखिम-प्रतिकूल तरिकाले व्यापार गर्न तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा। त्यो भन्नु हो, एकचोटि तपाईले हामीबाट स receive्केत प्राप्त गर्नुभयो भने - तपाईंलाई कुन क्रिप्टो जोडीले व्यापार गर्नुपर्दछ, तपाईंलाई लामो वा छोटो हुनुपर्दछ, र कुन प्रविष्टि र बाहिर निस्किने मूल्यलाई लक्षित गर्नुपर्नेछ।
हाम्रा ग्राहकहरूले भनेको कुरा यही हो
मलाई थाहा थिएन कि म के गरिरहेको छु तर नि: शुल्क टेलिग्राम समूहमा सामेल भएपछि मैले अब एक खाता खोलेको छु व्यावसायिक दलाल र म अब VIP समूहबाट निम्न ट्रेडहरू। म अब दैनिक प्राविधिक विश्लेषण पढ्छु र युट्यूब अनुसरण गर्दछु च्यानल र सबै भिडियोहरू हेर्नुहोस्।
VIP टेलिग्राममा सम्मिलित भएदेखि मैले क्रिप्टोको बारेमा धेरै सिकेको छु समूह त्यहाँ दैनिक लेख हुन् म सक्छु पढ्नुहोस् र त्यसपछि ब्याक अप गर्न ब्याक गर्नुहोस् जानकारी यो हो मेरो लागि १० बाहिर १०
म नि: शुल्क टेलीग्राममा सामेल भएँ र चाँडै VIP समूहमा अपग्रेड गरियो। म प्राविधिक विश्लेषणलाई वास्तवमै जानकारीमूलक फेला पार्दछु र यसले मलाई क्रिप्टोकरन्सी र कसरी यसलाई कसरी व्यापार गर्ने बारेमा थप जान्न मद्दत गर्दछ।
प्रदान गरिएका संकेतहरू अनुसरण गर्न धेरै सजिलो हुन्छ।
हामी प्रत्येक टेक्निकल सहित पूर्ण टेक्निकल एनालिसिस पठाउछौं, तलका ट्रेडहरूको उदाहरण हेर्नुहोस्!
हाम्रो व्यापारीहरू सम्पूर्ण दुनिया भर मा ट्रेडिंग फ्लोर बाट scout गरिएको छ!
तपाईं सित्तैमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ VIP समूह हाम्रो ट्रेडहरूको उदाहरण हेर्न तलको बटनको क्लिकको साथ।
सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो संकेतहरूको लागि
तपाईलाई न केवल बजारमा उपलब्ध उत्तम क्रिप्टो स find्केतहरू फेला पार्न आवश्यक छ - तर एक शीर्ष-मूल्या rated्कन ब्रोकर पनि आवश्यक अर्डरहरू राख्न। जे भए पनि तपाईको छेउमा राम्रो ब्रोकर बिना, तपाई क्रिप्टो ट्रेडिंग दृश्य पहुँच गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईंले शुल्क र आयोगहरू हेर्नु अघि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं हाम्रो क्रिप्टो सals्केतहरू नियमन गरिएको, भरोसायोग्य ब्रोकरको साथ प्रयोग गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवस, धेरै क्रिप्टो ट्रेडिंग दृश्य एक नियामक अनुमतिपत्र बिना संचालन गर्दछ - जुन धेरै समस्याग्रस्त छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यसको मतलब यो छ कि ब्रोकरले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय निकायलाई जवाफ दिन आवश्यक पर्दैन - त्यसैले ग्राहक सेवा र लगानीकर्ता संरक्षण जस्ता चीजहरू सामान्यतया अवस्थित हुन्छन्। तपाइँलाई सहि दिशातर्फ औंल्याउन मद्दत पुर्‍याउन - यस ठाउँका केही प्रमुख नियामकहरूले एफसीए (युके) एसईसी (यूएस), एएसआईसी (अष्ट्रेलिया), र साइसेक (साइप्रस) समावेश गर्दछ। ...
आयोग र स्प्रेडहरू
जस्तो कि हाम्रो केहि क्रिप्टो स्केतहरूले द्रुत र मामूली लाभहरू लक्षित गर्दछ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले कम ब्यक्ति र छोटो स्प्रेडहरू प्रदान गर्ने ब्रोकर छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। पहिलेको सम्बन्धमा, त्यहाँ धेरै क्रिप्टो दलालहरू अन्तरिक्षमा सक्रिय छन् जुन तपाईंलाई कमीशन-मुक्त व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ। यसको मतलव तपाईले भुक्तानी गर्ने एक मात्र शुल्क स्प्रेड मार्फत आउँछ।
क्राइप्टो सिग्नलहरू VIP टेलिग्राम समूहमा हाम्रा सबै सदस्यहरूसँग व्यापारका लागि ठूलो पूँजी हुँदैन। यदि यो तपाई जस्तो लाग्छ भने, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं हाम्रो संकेतहरूको सफल बनाउन सक्नुहुन्न। यसको विपरित, क्राइप्टो ब्रोकर प्रयोग गरेर जसले लीभरेज प्रस्ताव गर्दछ, तपाईं आफ्नो खातामा भन्दा बढि व्यापार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने लीभरेजको संख्या धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ - जस्तै प्रश्नमा ब्रोकर र तपाईं बस्ने देश जस्तो।
केवल तपाईंको छनौट ब्रोकरले डिजिटल मुद्रा बजार प्रस्ताव गर्दछ, यसको मतलब यो हाम्रो क्रिप्टो स for्केतहरूको लागि उपयुक्त हुन गइरहेको छैन भन्ने होइन। जे भए पनि, हाम्रो घर-भित्रका विश्लेषकहरू ट्रेडिंगको लागि विविध दृष्टिकोण अपनाउन रुचाउँदछन् - यसको अर्थ तिनीहरू सबै आकार र आकारका क्रिप्टो जोडीहरूलाई लक्षित गर्दछन्। उदाहरण को लागी, एक संकेत BTC / USD मा सम्बन्धित हुन सक्छ जबकि अर्को ETH / XRP बाट लाभ लिन सक्छ! यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो क्रिप्टो ब्रोकर प्रयोग गर्न उत्तम छ जुन बजारको हिप प्रदान गर्दछ - दुबै क्रिप्टो-देखि-फिएट र क्रिप्टो-देखि-क्रिप्टो जोडीहरू।
तपाईंले पक्का गर्नु पर्छ कि तपाईंको छनौट क्रिप्टो ब्रोकरले तपाईंको मनपर्दो भुक्तानी विधि प्रस्ताव गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो प्लेटफर्महरू हामी प्रस्ताव डेबिट / क्रेडिट कार्ड र ई-वालेट निक्षेपहरू प्रयोग गर्न मनपराउँदछौं। यसले तपाईंलाई तुरुन्त तपाईंको खातामा रकम प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ र धेरै केसहरूमा - नि: शुल्क। तपाईं प्लेटफर्मबाट बच्न सक्नुहुन्छ जुन केवल बैंक तार भुक्तानहरू मात्र स्वीकार गर्दछ। यो किनभने यो पैसा को लागी केहि दिन लिन सक्दछ।
यो भनिन्छ कि Bitcoin यस मार्केटप्लेसमा अहिले सम्मको सबैभन्दा धेरै कडा क्रिप्टोकरन्सी हो। त्यस्तै रूपमा, हाम्रा व्यापारीहरूले नियमित रूपमा यो अत्यधिक तरल सम्पत्ति वर्गबाट ​​लाभ लिन खोज्दछन्। जबकि धेरै जसो केसहरूमा हामी Bitcoin ट्रेडिंग संकेतहरू BTC / USD मा पठाउनेछौं - हामी क्रिप्टो-बाट-क्रिप्टो जोडीहरू पनि समावेश गर्दछौं। उदाहरण को लागी, यदि हाम्रो घर-घर अनुसन्धानकर्ताहरु लाई लाग्छ कि ETC को बिरुद्ध BTC overvalued छ - हामी हाम्रो खोजहरु संग Bitcoin ट्रेडिंग संकेत पठाउनेछौं। तपाइँलाई यहाँ कसरी क्रिप्टोसिग्नल्स.आर.टी. मा बिक्टोइन सिग्नलहरू उत्तम काम गर्दछ भनेर विचार दिन - तलको उदाहरण जाँच गर्नुहोस्। जोडी: BTC / USD अर्डर: थाने ...
तपाईले याद गर्नु भएको छ कि बजारमा उपलब्ध उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरू टेलिग्राम समूह मार्फत पहुँच गरिन्छ। यो किनभने तपाईले गुणस्तरीय क्रिप्टो स real्केतहरू वास्तविक समयमा प्राप्त गर्नुहुनेछ - यसको मतलब तपाईले मुनाफा कमाउने अवसर फेरि कहिल्यै गुमाउनुहुनेछैन। सबै भन्दा राम्रो क्रिप्टो संकेतहरू टेलीग्राम समूहहरूमा सामान्यतया हजारौं सक्रिय सदस्यहरू हुन्छन्। यसले तपाइँ र तपाइँका साथी सदस्यहरूलाई अनुप्रयोग मार्फत क्रिप्टो ट्रेडि trading विचारहरू छलफल गर्न अनुमति दिन्छ। उत्तम क्रिप्टो स Te्केतहरू टेलीग्राम समूहहरू पनि वास्तविक-समय ग्राहक समर्थनको साथ आउँदछन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, टेलिग्राम मार्फत गुणवत्ता स receiving्केतहरू प्राप्त गर्दै - उत्तम प्रोविड ...
तपाईंले शुल्क र आयोगहरू हेर्नु अघि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं हाम्रो क्रिप्टो सals्केतहरू नियमन गरिएको, भरोसायोग्य ब्रोकरको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
दुर्भाग्यवस, धेरै क्रिप्टो ट्रेडिंग दृश्य एक नियामक अनुमतिपत्र बिना संचालन गर्दछ - जुन धेरै समस्याग्रस्त छ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यसको मतलब यो छ कि ब्रोकरले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय निकायलाई जवाफ दिन आवश्यक पर्दैन - त्यसैले ग्राहक सेवा र लगानीकर्ता संरक्षण जस्ता चीजहरू सामान्यतया अवस्थित हुन्छन्।
तपाइँलाई सहि दिशातर्फ औंल्याउन मद्दत पुर्‍याउन - यस ठाउँका केही प्रमुख नियामकहरूले एफसीए (युके) एसईसी (यूएस), एएसआईसी (अष्ट्रेलिया), र साइसेक (साइप्रस) समावेश गर्दछ।
जस्तो कि हाम्रो केहि क्रिप्टो स्केतहरूले द्रुत र मामूली लाभहरू लक्षित गर्दछ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले कम ब्यक्ति र छोटो स्प्रेडहरू प्रदान गर्ने ब्रोकर छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
पहिलेको सम्बन्धमा, त्यहाँ धेरै क्रिप्टो दलालहरू अन्तरिक्षमा सक्रिय छन् जुन तपाइँलाई कमिसन-रहित व्यापार गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यसको मतलव तपाईले भुक्तानी गर्ने एक मात्र शुल्क स्प्रेड मार्फत आउँछ।
केवल तपाईंको छनौट ब्रोकरले डिजिटल मुद्रा बजार प्रस्ताव गर्दछ, यसको मतलब यो आवश्यक छैन कि यो हाम्रो क्रिप्टो स for्केतहरूको लागि उपयुक्त हुनेछ।
जे भए पनि, हाम्रो घर-भित्रका विश्लेषकहरू ट्रेडिंगको लागि विविध दृष्टिकोण अपनाउन रुचाउँदछन् - यसको अर्थ तिनीहरू सबै आकार र आकारका क्रिप्टो जोडीहरूलाई लक्षित गर्छन्। उदाहरण को लागी, एक संकेत BTC / USD मा सम्बन्धित हुन सक्छ जबकि अर्को ETH / XRP बाट लाभ लिन सक्छ!
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो क्रिप्टो ब्रोकर प्रयोग गर्न उत्तम छ जुन बजारको हिप प्रदान गर्दछ - दुबै क्रिप्टो-देखि-फिएट र क्रिप्टो-देखि-क्रिप्टो जोडीहरू।
तपाईंले पक्का गर्नु पर्छ कि तपाईंको छनौट क्रिप्टो ब्रोकरले तपाईंको मनपर्दो भुक्तानी विधि प्रदान गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो प्लेटफर्महरू हामी प्रस्ताव डेबिट / क्रेडिट कार्ड र ई-वालेट निक्षेपहरू प्रयोग गर्न मनपराउँदछौं। यसले तपाईंलाई तत्काल तपाईंको खातामा रकम प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ र धेरै केसहरूमा - नि: शुल्क।
तपाईं प्लेटफर्मबाट बच्न सक्नुहुन्छ जुन केवल बैंक तार भुक्तानहरू मात्र स्वीकार गर्दछ। यो किनभने यो पैसा को लागी केहि दिन लिन सक्दछ।
यो भनिन्छ कि Bitcoin यस मार्केटप्लेसमा अहिले सम्मको सबैभन्दा धेरै कडा क्रिप्टोकरन्सी हो। त्यस्तै रूपमा, हाम्रा व्यापारीहरूले नियमित रूपमा यो अत्यधिक तरल सम्पत्ति वर्गबाट ​​लाभ लिन खोज्दछन्।
जबकि धेरै जसो केसहरूमा हामी Bitcoin ट्रेडिंग संकेतहरू BTC / USD मा पठाउनेछौं - हामी क्रिप्टो-बाट-क्रिप्टो जोडीहरू पनि समावेश गर्दछौं। उदाहरण को लागी, यदि हाम्रो घर-घर अनुसन्धानकर्ताहरु लाई लाग्छ कि ETC को बिरुद्ध BTC overvalued छ - हामी हाम्रो खोजहरु संग Bitcoin ट्रेडिंग संकेत पठाउनेछौं।
तपाइँलाई यहाँ कसरी क्रिप्टोसिग्नल्स.आर.टी. मा बिक्टोइन सिग्नलहरू उत्तम काम गर्दछ भनेर विचार दिन - तलको उदाहरण जाँच गर्नुहोस्।
जोडी: BTC / USD
सीमा: $ 61,500
स्टप-घाटा: $ २62,000
लाभ लिनुहोस्: $ 57,000$XNUMX..XNUMX
माथी Bitcoin संकेत सुझाव देखाउँदछ कि हाम्रो घर-घर ट्रेडरहरु विश्वास गर्छन् कि BTC / USD आउँदो घण्टामा घट्नेछ। तर, हामी बजारमा प्रवेश गर्न चाहँदैनौं यदि जोडीले हाम्रो मनपर्दो ट्रिगर पोइन्टलाई हिट गर्दैन - जुन यस उदाहरणमा $ 61,500 हो।
यो सुनिश्चित गर्न कि हामी लगातार माथिल्लो स्विंगको घटनामा कभर गरिएको छ, बिटकॉइन संकेतहरूले सुझाव पनिa62,000 को एक स्टप-घाटा मूल्य सल्लाह गर्दछ।
यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी सँधै प्रदान गर्छौं जब हामी हाम्रा गुणवत्ता बिटक्वाइन संकेतहरू वितरण गर्दछौं - किनकि हामी जोखिम-प्रतिकूल ट्रेडिंगमा राम्ररी जान्दछौं। हाम्रो बिटकॉइन ट्रेडिंग सals्केतहरूमा पनि एक सुझाव लिइएको लाभ-अर्डर समावेश गर्दछ। यदि ट्रिगर गरियो भने, यसले स्वचालित रूपमा तपाईंको छनौट क्रिप्टो ब्रोकरमा तपाईंको नाफामा लक गर्दछ।
नि: शुल्क बिटकॉइन ट्रेडिंग संकेतहरू
के तपाईं निःशुल्क Bitcoin संकेतहरूको लागि बजारमा हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, हामी क्राइप्टो सिग्नल.स. हाम्रा धेरै प्रतिस्पर्धीहरू जस्तो नभई - हामी तपाईलाई सीमा अर्डर वा स्टप-लॉस मूल्य प्रकट गर्न थप पैसा तिर्न आग्रह गर्दैनौं।
यसको विपरित, तपाईले माथि हामीले छलफल गरेका सबै जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ - कि त्यो Bitcoin जोडी हो, लामो वा छोटो स्थिति, र सीमा, स्टप-नोक्सान, र नाफा मूल्य।
हामी सित्तैमा बिटकॉइन ट्रेडिंग स offer्केतहरू प्रदान गर्ने कारण यो हो कि यसले नयाँ सदस्यहरूलाई हाम्रो सेवाको परीक्षणको लागि प्रतिबद्धता गर्नु अघि बाहिर जाँच गर्दछ। महत्वपूर्ण रूपमा, तपाइँले नि: शुल्क बिटकॉइन स sign्केतहरू प्राप्त गर्न तपाइँले गर्नुपर्ने सबै कुरा यहाँ क्रिप्टो सिग्नल.अर्ग.org मा हामीसँग एक खाता दर्ता गर्नुहोस्।
हाम्रो नि: शुल्क क्रिप्टो ट्रेडिंग संकेतहरूमा पहुँच पाउन तपाईंले कुनै कोष जम्मा गर्नु आवश्यक छैन। बरु, एकचोटि तपाईंले दर्ता गर्नुभयो - तपाईं सिधा हाम्रो नि: शुल्क टेलिग्राम संकेत समूहमा जान सक्नुहुन्छ!
तपाईले याद गर्नु भएको छ कि बजारमा उपलब्ध उत्तम क्रिप्टो सals्केतहरू टेलिग्राम समूह मार्फत पहुँच गरिन्छ। यो किनभने तपाईले गुणस्तरीय क्रिप्टो स real्केतहरू वास्तविक समयमा प्राप्त गर्नुहुनेछ - यसको मतलब तपाईले मुनाफा कमाउने अवसर फेरि कहिल्यै गुमाउनुहुनेछैन।
सबै भन्दा राम्रो क्रिप्टो संकेतहरू टेलीग्राम समूहहरूमा सामान्यतया हजारौं सक्रिय सदस्यहरू हुन्छन्।
यसले तपाइँ र तपाइँका साथी सदस्यहरूलाई अनुप्रयोग मार्फत क्रिप्टो ट्रेडि ideas विचारहरू छलफल गर्न अनुमति दिन्छ।
उत्तम क्रिप्टो स Te्केतहरू टेलीग्राम समूहहरू पनि वास्तविक-समय ग्राहक समर्थनको साथ आउँदछन्।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, टेलिग्राम मार्फत गुणस्तरको स receiving्केतहरू प्राप्त गरेर - यस ठाउँका सर्वश्रेष्ठ प्रदायकहरूले प्रत्येक सुझावमा ग्राफ वा चार्ट पनि संलग्न गर्दछ।
अर्को शब्दहरूमा, उत्तम क्रिप्टो स Te्केतहरू टेलिग्राम समूहहरूले तपाईंलाई एकै समयमा कमाउन र सिक्न अनुमति दिन्छ।
तपाइँले तपाइँको छनौटको सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो सिग्नलहरू टेलिग्राम समूहको साथ सुरू गर्नु अघि - हामी एक अनुकूलन सूचना सेट अप गर्न सुझाव दिन्छौं। यो आवाज सुचित गरेर तपाईंको क्राइप्टो संकेतहरू टेलिग्राम समूहको लागि अद्वितीय हो भनेर सुनिश्चित गरेर - तपाईं सिधै अनुप्रयोग खोल्न जान्नु हुनेछ ताकि तपाईं सुझाव गरिएका अर्डरहरू राख्न सक्नुहुनेछ।
नि: शुल्क क्रिप्टो स Te्केतहरू टेलीग्राम समूह
तपाईं मध्ये केही हाम्रो प्रीमियम योजना अपग्रेड गर्नु अघि हाम्रो गुणवत्ता क्रिप्टो संकेतहरू बाहिर प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हो भने, तपाईं यो जान्न खुशी हुनुहुनेछ कि हामी पनि एक निःशुल्क क्रिप्टो संकेतहरू टेलिग्राम समूह प्रस्ताव गर्दछौं। एक पटक तपाईं हाम्रो बढ्दो टेलिग्राम च्यानलमा सम्मिलित हुनुभयो भने - तपाईंले प्रति हप्ता x x नि: शुल्क क्रिप्टो स receive्केतहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यसले क्रिप्टो-देखि-क्रिप्टो जोडीहरू BTC / EUR, BTC / USD, वा ETH / USD जस्ता कभर गर्न सक्दछ। अन्य केसहरूमा, हाम्रो केहि फ्री क्रिप्टो स्केतहरूले दुई जोडी सम्पत्ति जोडीहरूलाई समेट्छ। उदाहरण को लागी, हामी नियमित रूप बाट BTC / ETH, BTC / XRP, र ETH / LTC मा हाम्रो नि: शुल्क क्रिप्टो संकेत पठाउछौं।
एकचोटि तपाईले हाम्रो टेलिग्राम समूह मार्फत नि: शुल्क क्रिप्टो संकेत प्राप्त गर्नुभयो - तपाईले गर्नुपर्ने सबै कुरा भनेको तपाइँको छनौट ब्रोकरमा जानुहोस् र सुझाव गरिएका अर्डरहरू राख्नुहोस्। वास्तवमा, यदि तपाईं चलाख व्यापारी हुनुहुन्छ - तपाईं सम्भवतः नि: शुल्क ब्रोकरेज डेमो खाता मार्फत हामीलाई जाँच गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ।
त्यसो गर्दा - तपाईले नि: शुल्क क्रिप्टो सals्केतहरूमा एक पैसा पनि जोखिम लिन आवश्यक पर्दैन। यसको सट्टामा, तपाईं हाम्रो कागजात फण्डहरूसँग सुझाव दिईएको अर्डरहरू राख्नुहुनेछ। प्रत्येक सिग्नल स्थिति बन्द भए पछि - तपाईले स्थितिको नतीजा लेख्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणको लागि, यदि हामीले फ्रि क्रिप्टो स signal्केतमा २ on पिप्स बनायौं भने, यो नोट गर्नुहोस्। तपाईंको ट्रायलको अन्त्यमा - यदि तपाईंलाई हाम्रो नि: शुल्क क्रिप्टो सals्केतले तपाईंको अपेक्षाहरू पूरा गरेको भेट्टायो भने - तपाईं हाम्रो प्रीमियम योजना अपग्रेड गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गरेर, तपाईले 25--3 प्रीमियम क्रिप्टो स every्केतहरू प्रत्येक दिन प्राप्त गर्नुहुनेछ!
हाम्रो वीआईपी क्रिप्टो सN्केतमा के समावेश छ टेलीग्राम ग्रुप
हाम्रो विश्वव्यापी १०,०००+ सदस्यहरू सम्मिलित हुनुहोस् जो हाम्रो बाट फाइदा लिई रहेका छन् VIP क्रिप्टो स Sign्केतहरू र पेशेवर व्यापारी बन्नुहोस्।
2-3एक दिन क्रिप्टो सals्केत गर्दछ
१kk +टेलिग्राम सदस्यहरू
के तपाईं बन्न तयार हुनुहुन्छ?
एक सफल क्रिप्टो व्यापारी?
CryptoSignals.org उच्च प्रशिक्षित ट्रेडरहरूको टोली हो जुन २०१ 2014 देखि क्रिप्टोकुरेन्सी बजारको कारोबार गर्दैछ, हामीले एउटा समुदाय निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौं। तार ताकि अन्यले हाम्रो सही क्रिप्टोकरन्सी स from्केतहरूबाट सिक्न सकून्।
सामाजिक मीडियामा हामीलाई भ्रमण गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क क्रिप्टो सिग्नल मे २०२२ र क्रिप्टो समाचार
ब्लक मिडिया लिमिटेड - 67
फोर्ट स्ट्रीट, आर्टेमिस हाउस,
ग्रान्ड केम्यान, KY1-1111,
2022 २०२१ CRYPTOSIGNALS.ORG। सबै सही आरक्षण।
cryptosignals.org वेबसाइट र हाम्रो टेलिग्राम समूह भित्रको जानकारी शैक्षिक उद्देश्यका लागि हो र यसलाई लगानी सल्लाहको रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन। वित्तीय बजारहरूको व्यापारले उच्च स्तरको जोखिम बोक्छ र सबै लगानीकर्ताहरूको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। Cryptosignals.org ले हाम्रो टेलिग्राम समूहहरूमा उपलब्ध गराइएका सामग्रीको परिणाम स्वरूप भएको नोक्सानीको लागि कुनै जिम्मेवारी लिने छैन।
क्रिप्टो सिग्नल टोलीले तपाईंलाई सीधै सम्पर्क गर्दैन र भुक्तानीको लागि कहिल्यै सोध्दैन। हामी मार्फत हाम्रा ग्राहकहरूसँग कुराकानी गर्छौं [ईमेल सुरक्षित] हामीसँग केवल एउटा नि: शुल्क टेलिग्राम च्यानल छ जुन साइटमा फेला पार्न सकिन्छ। वीआईपी समूह सदस्यता खरिद गरेपछि उपलब्ध छ। यदि तपाईंले कसैबाट कुनै सन्देशहरू प्राप्त गर्नुभयो भने, कृपया तिनीहरूलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् र कुनै पनि भुक्तानी नगर्नुहोस्। यो क्रिप्टो सिग्नल टोली होइन